War laga naxo oo laga soo sheegay ninkii weerarka Garissa hogaaminayay
Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed, ninkii hagayay weerarkii lala beegsaday Jaamacadda Gaarisa ee lagu dilay in ka badan 140 arday, 70 kalena lagu dhaawacay, ayaa la sheegay in uu dhalay oday ka tirsan madaxda dowladda ee gobolka Mandera.
Waxuu dhigan jiray Dugsiga Sare ee Wamy, halkaas oo uu buundo sare ku baasay. Kadib waxuu u gudbay kuliyadda sharciga ee Jaamacadda Nairobi. Ma uusan dhameysan tacliintiisa jaamacadeed oo waxaa seejiyay daroogo iyo tumasho, taas oo sababtay in uu qaado cudurka HIV/AIDS ee halista ah.
Intii uu jaamacadda dhiganayay ayaa mar xabsiga la dhigay kadib markii lagu qabtay isagoo daroogo ka iibinaya ardayda, laakiin reerkiisa ayaa xabsiga ka soo damiintay.
Dumarka uu la tuman jiray waxaa ugu dambeysay haweenay magaceeda lagu sheegay Akinyi oo la aaminsanyahay in ay cudurka HIV/AIDSka qaadsiisay, cudurkaas oo ay markii dambe u dhimatay dabayaaqadii bishii March 2014. Akinyi cunug wecel ayay kal hore u dhashay Cabdiraxmaan, cunugaas oo haatan la nool ayeydii, Akinyi hooyadeed, oo degan Kisumu.
Asxaabta Cabdiraxmaan ayaa sheegay in uu aad ugu walwalsanaa cudurka ay Akinyi qaadsiisay iyo sida ay waalidkiisa ula dhaqmi doonaan haddii ay ogaadaan arrinkaas, taas oo laga yaabo in ay sababtay in uu argagixisada ku biiro. Mid ka mid ah asxaabtiisa oo lagu magacaabo Maxamed Atom ayaa isna ISIS ku biiray kadib markii uu nolosha ka raja dhigay.
Maydka ninkii argagixisada hoggaaminayay oo dhexyaala dhiiggiisa
Dowladda Soomaaliya oo lacag dul dhigtay madaxda al-Shabaab
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in lacag gaareysa $1.3 million oo dollar madaxooda la dul-dhigay 11 hoggaamiye oo ka tirsan argagixisada al-Shabaab, lacagtaas oo la siin doono qofkii gacan ka geysata ama soo sheegto xog horseedeyso in la soo qabto ama la dilo horjoogayaasha kooxda.
Liiska argagixisada la raadinayo ayaa waxaa ugu horreeyo hoggaamiyaha al-Shabaab Axmed Diiriye (Abuu-Cubayda) oo la dul-dhigay $250,000 (Laba boqol iyo konton kun oo dollar) iyo Mahad Warsame Qaley oo la dul dhigay lacag dhan $150,00. Waxaa sidoo kale liiska ku jira afhayeenka maleeshiyada Cali Maxamuud Raage oo lagu raadinayo lacag gaareyso $100,000, Cabdullaahi Cabdi Jimcaale (Daa’uud Suheyb), Maxamed Maxamed Nur (Sudan) , Cali Maxamed Xuseen (Cali Jeesto), Xasan Maxamed (Afgooye), Cabdullaahi Cusmaan, Maxamed Cabdi Muuse (Haabiil), iyo Yaasiin Cusmaan (Kilwa).
Waxaa kaloo liiska ku jira Maxamed Maxamuud (Dulyadeyn) madaxiisa la dhigay $100,000. Horjoogayahan ayaa waxaa sidoo kale raadineyso dowladda Kenya oo ku eedeysay in uu ku lug lahaa weerarkii jaamacadda Garissa. Liiska ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa la filayaa in kurbo saa’id ah saaro kooxdan oo markii goobaha dagaalka lagu jabiyay bilaabay in ay bartilmaameedsadaan shacabka aan waxba galabsan.
Dowladda Kenya oo 20 million oo shilin dul dhigtay Maxamed M. Kuno
Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday in qofkii soo sheega xog horseedeysa in la soo qabto ama la dilo dambiile Maxamed Maxamuud Kuno la siin doono abaalmarin gaareysa 20 million oo shilin (taas oo u dhiganta 215,000 oo doolar). Kuno ayaa la aaminsanyahay in uu soo abaabulay xasuuqii dhowaan Jaamacadda Gaarisa loogu geystay 147 arday iyo waardiye.
Maxamed Maxamuud Kuno oo ku magac dheer Dulyadeyn, dadka qaarkiina ay u yaqaanaan Gacmadheere, waa nin Soomaalida Kenya ah. Da’diisa lama garanayo laakiin waxaa lagu qiyaasay 50meeyo. Waxuu sanadkii 1993 ilaa 1995 u shaqeyn jiray hay’addii Al-Xarameyn Foundation ee irdaha loo laabay. Kadib waxuu sanadkii 1997 ilaa 200 macallin ka noqday Madrasada Najax ee Gaarisa, halkaas oo uu ku faafin jiray fikradihiisa xagjirnimada ah. Waxuu ahaa maamulaha madrasadaas ilaa sanadkii 2007.
Kuno waxuu uureeyay gabar Madrasada Najax dhigan jirtay oo la yiraahdo Khadiija Daa’uud, taas oo la sheegay in ay qaraabo ahaayeen oo lagu aaminay. Arrinkaas markii la ogaaday ayay qaraabadiisa deyriyeen, iskuulkana laga eryay. Waxaa la sheegay in uu lacag badan siiyay reerka gabadha si aanan loo dacweynin maadaama ay jirtay eedeyn hore oo aheyd in uu lacag ka lunsaday madrasada. Arrimahaas ayaa sababay in uu cararo dhanka Soomaaliya, halkaas oo uu ku biiray Midowga Maxkamadaha (MM), isagoo buuxiyay booska walaalkiis Cali oo ahaa sarkaal sare oo Maxaakiimta ka tirsan oo ay ciidamada Itoobiyaanku dileen.
Markii ay Midowga Maxkamaduhu burbureen waxuu ka mid noqday ururka Xisbul Islam, urukaas oo sanadkii 2010 ku biiray al-Shabaab. Bishii Diseembar ee la soo dhaafay ayay dowladda Kenya shaacisay in ay ninkaas raadineyso kadib markii la ogaaday in uu soo abaabulay weerar ay Shabaabku ka geysteen degaanka Mandera, halkaas oo 58 ruux oo Kenyan ah ay ku naf waayeen. Dadka uu ku qanciyay ama ku qalday ku biiritaanka al-Shabaab ayaa waxay u badnaayeen dad qaraabadiisa ah iyo arday uu macallin u ahaa.
Mukhtaar Roobow oo la sheegay inuu mar hore ka tagay al-Shabaab
Zakariya Ismaaciil Xersi, madaxii sirdoonka al-Shabaab oo sannadkii hore dabayaaqadiisa ka soo goostay kooxdaas ayaa wareysi uu siiyay idaacadda VOA-da ku xaqiijiyay in Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abu-Mansuur) oo ka mid ahaa saraakiisha sare ee al-shabaab uu isaga baxay kooxdaas.
Zakariye oo hadda la shaqeeya sirdoonka dowladda Soomaaliya ayaa waxaa kaloo uu sheegay in Mukhtaar Roobow uu ku nool yahay miyiga dhulka uu deegaan ahaan kasoo jeedo ee Baay iyo Bakool, isagoo tilmaamay inuu yahay shaqsiga keliya ee ka soo haray madaxdii hore ee al-Shabaab.
Mar la weydiiyay sida uu u arko amiirka cusub ee al-Shabaab Sheekh Axmed Diiriye (Abu-Cubeyda), Zakariye ayaa sheegay in uu yahay nin ku feker ah Axmed Godane oo lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah. Zakariye waxuu intaa ku daray in amiirka cusub garabeysi uu booska ku qabsaday maadaama ay is xigaan amiirkii hore, uusanna buuxin karin kaalintii Godane, marka la eego karti ahaan, go’aan adeyga iyo calool adeyga.
Warar kale ayaa sheegaya in Axmed Diiriye uu ciidanka amniyaatka al-Shabaab ku amray in ay soo dilaan Mukhtaar Roobow, balse taas waa ay ku guul dareysteen oo lafta qabiilka uu ka dhashay Roobow haddana uu dhex degan yahay ayaa difaacay, taas oo muujineysa in awoodda argagixisada al-Shabaab ay wiiqantay, ururkuna uu burbur ku sugan yahay.